Dhismooyinka dhaadheer oo kusoo badanaya Muqdisho Sawiro
Home Editors picks Dhismooyinka dhaadheer oo kusoo badanaya Muqdisho Sawiro
Maalmihii ugu danbeeyay waxaa magaalada Muqdisho kusoo badanayay dhismaha dabaqyada dhaadheer, iyadoo qaybo kamid ah magaalada ay aad qaali unoqdeen dhulalka, waxaana meelaha qaar adag inaad ka iibsato dhul badaan.
Degmooyinka, Howlwadaag, Wardhiigleey, hodan, X/weyne iyo Waaberi, waa meelaha ugu qalisan dhanka iibsiga guryaha ama boosaska banaan.
Hadaba degmooyinkaan ayaa waxaa ka soconaya dhismaha guryo aad u dhaadheer, kuwaasoo intooda badan ah Hotelo iyo goobo ganacsi oo ay dhisanayaan dad noqday shirko, islamarkaasna doonaya ineey ka samaystaan goobo ganacsi oo waawen.
Hareeraha wadada Maka Al-mukarama ayaa ah meesha ugu badan ee ay kasoconayaan dhismaha Hoteelada iyo goobaha ganacsi, waxaana aad usii kacaya qiimaha lagu kala iibsado guryaha.
Magaalada Muqdisho, 2 sano kahor waxay ahayd meel Cidlo ah, islamarkaasna kama jirin dhismooyin iyo horumar ganacsi, laakiin markii ay kabaxeen Al-shabaab, waxaa dib u bilaawday noloshii iyo ganacsigii, iyadoo dadka ay ku dhiiranayaan hadda ineey dib u dhistaan Hotelo aan ladhisin 22-kii sano ee lasoo dhaafay sababo laxiriira dagaalada iyo dhibaatooyinka wadanka kajiray.
Inkastoo qaybo kamid ah magaalada ay kasoconayaan horumar iyo dib u dhis ballaaran hadana waxaa jira in degmooyinka qaar ee magaalada aysan helin dib udhis iyo dayactir.
Degmooyinka Boondheere, Yaaqshiid iyo huriwaa, ayaa ah weli ah meelo uu kamuuqdo bur bur ballaaran oo ay ku reebeen dagaaladii in mudo ahba ku dhexmarayay Al-shabaab iyo Ciidamada doowlada oo kaashanaya AMISOM.
Marka aad dhexmareeyso degmooyinkaas aan weli helin daryeelka iyo dib udhiska, waxaa arkeeysaa guro bur buray oo ay madaafiicda six un ugu dhaceen.